Xiaomi na-arụ ọrụ na teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa ikuku 40-watt | Gam akporosis
Xiaomi na-emepe emepe teknụzụ na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa ikuku 40-watt
Mgbe idochara gị 30 watt wireless ngwa ngwa odori technology, mgbasa ozi ọhụụ gosipụtara nke ahụ Xiaomi na-arụ ọrụ ugbu a na mmepe nke teknụzụ yiri ya, mana nke 40 watts.
Companylọ ọrụ anaghị anọdụ nkịtị ruo ogologo oge mgbe ha kwuchara ọkwa ngwaahịa ma ọ bụ atụmatụ dị n'ahịa. Kama, ọ na-agagharị mgbe niile ka ọ ghara ịdaba n'azụ asọmpi ahụ, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị ọhụrụ. Na teknụzụ na-esote, a ga-egbutu ọsọ ọsọ nke smartphones n'ọdịnihu na-erughị nkeji 69 - dabere na batrị 4,000 mAh-, nke bu ihe 30W eweputara ohuru nwere ike iru.
Enwere ike ịtọpụta chaja ikuku 40W n'ọdịnihu dị nso. Nke a ga - etinye Xiaomi na mpaghara pụrụ iche. Igwe chaja ọhụrụ 30W bụ nke mbụ na ụwa ma na-atụ anya ịpụta na Mi 9 Pro 5G, nke ga-amalite n'oge na-adịghị anya. Igwe chaja na-enweghị eriri 30W nwere ike ịgba batrị mAh 4,000 site na 0% gaa na 50% na 25 nkeji, ebe ọ na-ewe naanị 69 nkeji iji kwụọ ụgwọ zuru ezu, dịka anyị na-ekwu. Site na data a, anyị nwere ike nweta echiche banyere uru nke ọgbọ a na-akwụ ụgwọ na teknụzụ.
Companylọ ọrụ ahụ kwuru nke ahụ 40W wireless super ngwa ngwa odori technology abanyela ule ule. Nke a ga-enye ihe ka mma 33% ngwa ngwa odori ikike. Na mgbakwunye na ikuku ikuku na-akwụ ụgwọ, Xiaomi na-ekwu na ọkọlọtọ ọkọlọtọ n'ọdịnihu ga-anapụta ọ bụghị naanị nkwụnye ụgwọ ikuku kamakwa ọ na-akwụ ụgwọ ụgwọ ma gbanwee ụgwọ. Enwere ike ghara ịhapụ ngwaahịa ma ọ bụ wepụta n'afọ a, mana anyị nwere olile anya na ọ ga-adaba ozugbo enwere ike; Anyị na-atụ anya na ọ ga-abụ n’afọ 2020, nke bụ n’afọ na-abịanụ ma na-abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi na-emepe emepe teknụzụ na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa ikuku 40-watt
Etu esi eji WhatsApp Web na mbadamba gam akporo
Samsung na-egosi ọhụrụ Galaxy Fold na vidiyo